के होला चिनमा आइफोनको बजार ? « LiveMandu
के होला चिनमा आइफोनको बजार ?
१४ पुष २०७५, शनिबार १९:१७
शत्ति राष्ट्रहरु बिच बिभिनन कुराहरुलाई लिएर बिबाद भइरहेको हुन्छ । सुरक्षा, सिमाना, हस्तक्षेप तथा प्रविधिका विषयसँग जोडिएको कुराहरुमा सधै ठुला देशहरु अमेरिका, चाइना, रसिया तथा जापान जस्ता देशहरु बिच बिबाद देखिन्छ । केही समय अघि सुरक्षा जोखिमको मामिलामा विभिन्न मुलुकहरुमा अनुसन्धान तथा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीको हुवावे पनि एक हो । प्रविधिको बिकाससँगै प्रविधिसँगै अघि बढिरहेको हुवावेले फाइभ जि को लागि तयारी गरिरहेको थियो ।
यो प्रविधिको युद्धमा अमेरिकाले हुवावेले चिनलाई अन्य देशको सुचना दिएको भन्दै क्यानडा लगायतका देशहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । हुवावेकी मुख्य वित्तीय अधिकारी मेङ वानझोउ अमेरिकी अधिकारीको अनुरोधमा क्यानडामा पक्राउ गरियो र त्यसको केही समयपछि चिनले पनि चिनमा रहेका क्यानेडी नागरीकलाई पक्राउ गरेको खबर बाहिर आयो ।
यस प्रकारको घटना पछि चिनमा हुवावेलाई साथ दिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । यो अवस्थामा हुवावेलाई सबै चिनिया नागरिकले साथ दिदै अन्य ब्रान्डलाई प्रयोग नगर्ने अभियान पनि चलाउन लागेका छन् । हुवावेका सामानमा विशेष छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै आइफोनको राम्रो बजार मानिने चिनमा हुवावेमाथिको प्रतिबन्धले झन असर गर्ने देखिएको छ ।